छोरी घर बाहिर जथाभावी हिंड्न थालेपछि लगाईदिन्छिन् छोरीलाई ‘तीनमहिने सुई’ ! – List Khabar
Home / समाचार / छोरी घर बाहिर जथाभावी हिंड्न थालेपछि लगाईदिन्छिन् छोरीलाई ‘तीनमहिने सुई’ !
admin November 8, 2021 समाचार Leaveacomment 65 Views
सरला (नाम परिवर्तन) ले अपांगता भएकी आफ्नी १९ वर्षीया छोरीलाई लामो समययता परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीन महिने सुई लगाइदिने गरेकी छन। द्व’न्द्व’का’लमा शा’री’रि’क हिं’सा’स’मेत खेपेकी सरलाका तीनमध्ये एक छोरी मा’नसि’क रूपले अपांगताको सि’कार भएकी छन्। विपन्न परिवारकी उनी दिनभर मजदुरी गर्न गएको समयमा उमेर पुगेकी छोरी जथाभावी हि“ड्न थालेपछि सावधानी अपनाउँदै उक्त सुई रोज्नुपरेको बताउँछिन्।
Next हरेक-बिहान भिजेको चना खानुका फाईदै फाईदा ! तुरुन्तै हेर्नुहोस्